အယ်ဒီတာမင်းများ ခင်ဗျာ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Opinions & Discussion » အယ်ဒီတာမင်းများ ခင်ဗျာ
Posted by မောင်ဆန်း on Feb 21, 2012 in Opinions & Discussion | 30 comments
နိုင်ငံပိုင် သတင်းစာတွေဖြစ်တဲ့ ကြေးမုံ နဲ့ မြန်မာ့အလင်း သတင်းစာတွေဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ ကာလ တစ်လျှောက်လုံး အစိုးရအာဘော်တွေကို ဖော်ပြတဲ့စာစောင်တွေ အဖြစ်သာ ရပ်တည်နေခဲ့တာပါ ၊ လူအများစုက ဘယ်သူ မင်္ဂလာဆောင်လဲ ဘယ်သူသေသွားလဲ သိနိုင်ဘို့ အတွက်ပဲ သတင်းစာကိုဖတ်ခဲ့ကြပါတယ် ဒါပေမဲ့ စာလုံးပေါင်းသတ်ပုံနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အမှားကင်းအောင် ရပ်တည်နိုင်တာကိုတော့ ချီးကျူးရမှာပါ ။ မကြာသေးတဲ့ ကာလကစပြီး နိုင်ငံခြားက မီဒီယာတွေကို တိုက်ခိုက်တဲ့ ဆောင်ပုဒ်တွေ ဖြုတ်လိုက်တယ် ပြည်သူတွေရဲ့ကိုယ်စား ပြည်သူ့အသံလေးတွေကို ဖော်ပြလာတယ် ဘယ်နေရမှာတော့ လိုင်းကားတွေ စနစ်တကျ မရပ်ပါဘူး ၊ လူတွေက ၅၀၀၀ တန်ဖုံးတွေရဲ့ အသံကို စောင့်နေပါတယ် ဆိုတာမျိုးတွေပါ လာသလို နိုင်ငံခြားသတင်းထဲက ထူးခြားတာတွေလေးတွေ လူတွေ စိတ်ဝင်စားမှာလေးတွေကို အင်တာနက်ကနေ ဘာသာပြန်ဖော်ပြလာပါတယ် ။ သိပ်မကြာတော့တဲ့ အချိန်မှာ ပြင်ပမီဒီယာတွေက ထုတ်တဲ့ နေ့စဉ်သတင်းစာတွေ ပေါ်လာတော့မှာပါ အခုကတဲက လိုအပ်တာတွေ ပြင်ဆင် ဖြည့်စွက် ပြောင်းလဲတာမျိုး မလုပ်နိုင်ရင် သာရေး၊နာရေးနဲ့ အစိုးရတင်ဒါသတင်းဖော်ပြတဲ့ အဆင့်လောက်နဲ့ ကျန်ခဲ့တော့မှာပါ….
အပြင်မှာ ထုတ်တဲ့ ဂျာနယ်တွေ ဆိုတာ လူစွမ်းအား အရင်းအမြစ်ပိုင်းမှာ အစိုးရသတင်းစာတွေကို မယှဉ်နိုင်ကြပါဘူး ခါးဆက်ပျက်နေတဲ့ နှစ်တွေကအများကြီး အခုချိန်မှ ကြိုးစားဖြည့်တင်းနေကြရတာပါ မြန်မာ့အလင်းသတင်းစာဆိုရင် လိုဂိုအောက်မှာ ဖော်ပြထားတဲ့စာအရ ၁၉၁၄ ခုနှစ်ကတဲက ထုတ်ခဲ့တယ် ဆိုတာမို့ နှစ် ၁၀၀ နီးနီး ရှိနေပါပြီ ဒါကြောင့်လဲ သတင်းစာတွေက အယ်ဒီတာမင်းများဟာ နယ်ပယ်စုံမှာ နှံ့စပ်ပြီး အတွေ့အကြုံ နဲ့ ဗဟုသုတ အပိုင်းမှာ အရည်အချင်း ခေသူမဟုတ် ဆိုတဲ့ အဆင့်ရှိသူများဖြစ်ကြမှာပါ ၊ ပညာရှိသတိဖြစ်ခဲ ဖြစ်နေတာလေးတွေ ပြင်နိုင်ဘို့ သတိထားမိတာလေး တစ်ခု ပြောကြည့်ချင်ပါတယ် ဒေါ်မာမာအေးရဲ့ သီချင်းတစ်ပုဒ်လို တတ်သိနားလည်လွန်းလို့ ပြောရတာတော့ မဟုတ်ပါဘူး ခင်ဗျာ စေတနာအလျောက် အကြံပေးကြည့်တဲ့ သဘောပါ…
ဂျာနယ်တွေမှာ ပါတဲ့ သတင်းတွေက အခုဒါဆို ခဏနေ မဟုတ်တော့ဘူး ဆိုတာမျိုးဖြစ်တတ်တာမို့ ဂျာနယ်က သတင်းတွေကို မှားနိုင်တယ် ဆိုတဲ့ စိတ်နဲ့ ဖတ်မိပေမဲ့ သတင်းစာမှာ ပါတဲ့ ကျန်းမာရေးဗဟုသုတတွေ နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတော့ ရာခိုင်နှုန်းပြည့် ယုံကြည်စိတ် နဲ့ ဖတ်ရှုမှတ်သားမိပါတယ် ( တစ်ခါတစ်လေက လွဲရင်ပေါ့ ) အဲဒီတစ်ခါတစ်လေ ဆိုတာမျိုးကို ၂၀ ရက်နေ့က မြန်မာ့အလင်းသတင်းစာမှာ ထပ်ဖတ်လိုက်ရပါတယ်
သတင်းက ချက်နိုင်ငံမှ ခရီးသည်တင် လေယာဉ်မှူး ဝေဟင် ၌ လေယာဉ်မောင်းစဉ် သေဆုံး ဆိုတဲ့ သတင်းလေးပါ
သတင်းစာမှာ ဒီလို ဖော်ပြထားပါတယ်
သတင်းရဲ့ ဒုတိယအပိုဒ်မှာ ပါတာက အေတီအာ ၄၂ အမျိုးအစား အဆိုပါလေယာဉ်သည် ခရီးသည် ၄၆ ဦးကို တင်ဆောင်ကာ ပိုလန်နိုင်ငံ ၀ါဆောမြို့မှ ချက်သမ္မတနိုင်ငံ ပရာကွီမြို့သို့ ပျံသန်းလာစဉ် ဝေဟင် ၌ လေယာဉ်မှူး ရုတ်တရက်သေဆုံးသွားသဖြင့် တွဲဖက်လေယာဉ်မှူး က တာဝန်ယူမောင်းနှင်လာခဲ့ရကြောင်း အဆိုပါသတင်း ၌ ဖော်ပြသည် ။( အောက်ပုံ) ဆိုပြီးတော့ ပါတယ် ဒီရက်ထဲ သံတွဲမှာ ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဒီသတင်းလေးကိုလဲ စိတ်ဝင်စားသွားတယ် အောက်ပုံ လို့ ညွှန်းထားတဲ့ ပုံလေးကို ကြည့်မိတော့မှ သူ့သတင်းက မှန်ရော မှန်ရဲ့လားလို့ သံသယ ဖြစ်မိသွားတယ် ။ ကိုသန်းထွဋ်ဦး ရိုက်ပြထားလို့ သံတွဲက အေတီအာ လေယာဉ်ပုံ မြင်ဘူးထားတယ် သတင်းစာထဲက အောက်ပုံဆိုတာမှာ ပန်ကာလဲ မပါဘူး ဒါဆို အေတီအာတော့ မဟုတ်တော့ဘူး သေချာကြည့်မိတော့မှ အမ်အေအိုင်လေကြောင်းလိုင်းက အဲယားဘတ်စ် ဆိုတာတွေနဲ့ တူတာမို့ A-320 ဆိုတာ သိရတယ် ၊ ဒါဆို သတင်းစာထဲမှာ ဖော်ပြထားတဲ့ တရုတ်ကမ်းလွန်မှာ မှောက်တဲ့ သဘောင်္ပုံ ၊ အီတလီရဲတွေ ငွေချေးစာချုပ်အတုတွေ ဖမ်းမိတယ် ဆိုတဲ့ ပုံတွေကရော မှန်ပါ့မလားဆိုတဲ့ သံသယတွေ ၀င်မိသွားပါတယ် ၊သတင်းစာ မှာ အကြောင်းအရာပိုင်း မသိပေမဲ့ ပုံတွေ လွဲနေတာတော့ ဒါ ပထမဆုံးအကြိမ် မဟုတ်တော့ပါဘူး ဟိုတစ်လောက အီ၇န်သင်္ဘောသားတွေကို အမေရိကန် ရေတပ်ကယ်လိုက်တယ် ဆိုတဲ့ သတင်းမှာ စစ်သင်္ဘောနဲ့ ခရီးသည်တင်းသင်္ဘော လွဲနေတာမျိုး ၊ လေယာဉ်ကိုငှက်ဝင်တိုက်တဲ့ သတင်း တစ်ခုမှာ လေယာဉ်အမျိုးအစားလွဲနေတာမျိုး ခဏခဏ တွေ့ရတတ်ပါတယ်…
ကိုယ်မသိတဲ့ ဆိုင်မှာ ဈေးသွားဝယ်ရင် ဒီ ဆိုင်က ဈေးမှန်လား ဈေးတင်လား ဆိုတာ ကိုယ်သိတဲ့ ပစ္စည်းတစ်ခု ဈေးနှုန်းမေးကြည့်လို့ မှန်တယ်ဆို တခြားဟာတွေလဲ မှန်မှာပဲ ၊ ကိုယ်သိတဲ့ ဈေးထက် များနေရင် တခြားဟာတွေလဲ များနိုင်တယ် ဆိုတဲ့ သံသယ၀င်မိပါတယ် ၊ မြန်မာ့အလင်းသတင်းစာမှာလဲ မဟုတ်တဲ့ ပုံအလွဲ မြင်မိတော့ တခြားပုံတွေ သတင်းတွေရော မှန်မှ မှန်ပ့ါ မလား ဆိုတဲ့ အတွေး တွေ သံသယတွေ ၀င်လာမိပါတယ် ၊ ဒါ လူထုနဲ့ ဆက်ဆံနေရတဲ့ မီဒီယာ တစ်ခုအတွက်တော့ အနုတ်လက္ခဏာပါ ၊ လူထုကို အမှန် သတင်းတွေ ပေးရမဲ့ မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ ကိုယ်သိတာ သေချာတာပဲ ရေးသင့် ဖော်ပြသင့်ပါတယ် ( မသိရင် မသေချာ ရင် လုံးဝ မဖော်ပြပါနဲ့ ) လေယာဉ်ကိုယ်ထည်မှာ ချက်လေကြောင်းလိုင်းလို့ ပါတဲ့ လေယာဉ်ပုံ ဖော်ပြလိုက်ရင် ပြီးတာပဲကွာ ဆိုတဲ့ စာဖတ်ပရိတ်သက်ကို အထင်သေးတဲ့ အပြုအမှုမျိုး လုံးဝ မလုပ်သင့်ပါဘူး အယ်ဒီတာမင်းများအနေနဲ့ အတွေ့အကြုံ ဗဟုသုတ ကြွယ်ဝဘို့ လိုသလို ရိုးသားမှု ရှိဘို့ဘဲ လိုပါတယ်..
တကယ်တော့ သတင်းစာအကြောင်းပြောလိုက်ရပေမဲ့ ဂျာနယ်တွေကလဲ ကိုသာဆိုးတွေပါပဲ သတင်းထောက်တွေ အယ်ဒီတာတွေက ကိုယ်ရေးမဲ့ သတင်းနဲ့ ပတ်သက်လို့ ပညာရှင်တစ်ယောက်လို နားမလည်ရင်တောင်မှ ထိုက်သင့်တဲ့ နားလည်မှုတော့ ရှိရပါမယ် ဖတ်ခဲ့တာတွေထဲက မှတ်မိနေတာလေး ပြောပြရရင် လေယာဉ်တက်တဲ့ runway ကို ပြေးလမ်း မို့ taxi way ကို ဂျာနယ် အများစုက လေယာဉ်လျှောက်လမ်း လို့ သုံးကြပါတယ် ဒါ တော်တော်လေး နီးစပ်တယ်လို့ ထင်ပါတယ် အဲ taxi way ဆိုတာကို ဂျာနယ် တစ်စောင်ကတော့ အငှားယာဉ်လမ်း လို့ တိုက်ရိုက်ပြန်လိုက်တာကတော့ တော်တော်ကို ဆိုးလွန်းလှပါတယ် သူဌေးတွေ အတွက် ကိုယ်ပိုင်လမ်း တစ်ခု ထပ်လုပ်ပေးရမဲ့ ကိန်းပဲ ၊ လေယာဉ်တက်တဲ့ runway ပြေးလမ်း ကို eleven အယ်ဒီတာများက one way လို့ ရေးလိုက်တာ လဲ တွေ့မိပါသေးတယ် ၊ လွန်ခဲ့တဲ့ ၃ လလောက်က ဂျာနယ် တစ်စောင်မှာ ဖော်ပြထားတာက လေယာဉ်တစ်စီး အဆင်းဂီယာ မကောင်းလို့ ဆင်းမရ ဆိုတာမျိုး ရေးထားတယ် ၊ ကျွန်တော့်မှာ ဖတ်ရင်း နဲ့ အဆင်းဂီယာ မကောင်းဆိုတော့ အတက်ဂီယာ တော့ ကောင်းလို့နေမှာလို့ တွေးမိလိုက်သေးတယ် နောက် လေကြောင်းလောက က မိတ်ဆွေ တွေ မေးကြည့်တော့မှ landing gear ကို ဘာသာပြန်ထားတာ နေမှာတဲ့ လေယာဉ်ဘီးကို ပြောတာတဲ့ ၊ ဆရာဂျာနယ်လစ်တွေကြောင့် ပိုင်းလော့တွေ လေယာဉ်မောင်းရင် ငါတို့ ကားမောင်းသလို ဂီယာ ၁၊၂၊၃ ပြောင်းနေမှာပဲလို့ တွေးမိတဲ့ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ဒေါသပဲ ဖြစ်ရမှာလိုလို ဆရာဂျာနယ်လစ်တွေတောင် မှားရေးသေးတာပဲလို့ ခွင့်ပဲလွှတ်ရမလိုလို နဲ့ ဖြစ်ရသေးတယ် ၊ ဒီတပတ် voice ထဲမှာ အဲဒီလို အူလည်လည် သတင်းမျိုး ဖတ်လိုက်ရသေးတယ် ညွန်းစာဖွဲ့လို့ကတော့ ကုန်နိုင်ဖွယ်ရာ မထင် ဆိုတာမျိုးမို့ အယ်ဒီတာမင်းများကို မေတ္တာရပ်ခံချင်တာက ကိုယ်ရေးမဲ့ အကြောင်းအရာကို တီးမိခေါက်မိလောက်တော့ လေ့လာပါ ၊ ကိုယ်မသိတဲ့ မသေချာတဲ့သတင်းမျိုး ဓါတ်ပုံမျိုးကို မဖော်ပြကြပါနဲ့လို့ ……..
( အယ်ဒီတာကြီးများ စိတ်တော့ မဆိုးကြပါနဲ့နော)
ကိုနိုဇိုမိရေ ကျမသာဆို သိမှာ မဟုတ်ဖူး။ နမူးနထူးနဲ့ ဖတ်သွားလိုက်မှာပဲ ။ ကိုယ်သာဆိုလည်း
လေယာဉ်ဂီယာ ချိန်းတယ်ပဲ ထင်မှာပါ။ သိမှ မသိတာကိုး။
သိတဲ့လူတွေက ဒီလို ထောက်ပြပြောပြလိုက်တော့လည်း သူတို့လည်းပြင်သင့်တာ ပြင်လို့ရသွားတာပေါ့။
ဒီခဲလည်း ဗဟိုချက်ကို တည့်တည့် မှန်ပါစေလို့။
ဒါဆိုရင် လေယာဉ်ပျံက အော်တို ဂီယာ လား
ချစ်ရင်ထူးနှစ်ဆိုတော့ တစ်က ဘယ်ရောက်သွားပါလိမ့်
ကျွန်တော်တို့ ဆီက လေယာဉ်တွေက မော်ဒယ်နိမ့်တော့ အော်တိုဂီယာတော့ မဟုတ်လောက်ဘူးထင်တယ် မန်နူရယ်ပဲ ဖြစ်မှာပါ ၊
မနောက်ပါနဲ့ ဆရာရယ် အဲဒီလို ဂီယာပါတယ်လို့တော့ မကြားမိပါဘူး
101 % ထောက်ခံပါတယ် ။ ကျွန်တော်လည်း လေယာဉ်ကို ကြည့်ုပြီး ရီချင်မိခဲ့တယ် ။ ပန်ကာနဲ့ ဂျက်နဲ့ တစ်ခြားစီကို ထည့်ထားပါလားလို့။
ဂျာနယ်တွေလိုဘဲ အစိုးရ သတင်းစာတွေလည်း ကြုံ သလိုပုံထည့်ကုန်ပါရောလားဆိုပြီး စိတ်ကုန်သွားတယ် ။
ဂျာနယ် ထဲက ပုံတွေ က မကြာခဏ တစ်လွဲတွေချည်းဘဲ.. ဂျပန် ၀န်ကြီးချုပ် ဘယ်သူ ဘာမိန့်ခွန်းပြော ဆိုတာမျိ်ုးမှာတောင် အဲ့ဒီ ဂျပန် ၀န်ကြီးချုပ်မဟုတ်ဘဲ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ဆက်လောက်က ကျန်ခဲ့တဲ့ ၀န်ကြီးချုပ်ပုံထည့်လိုထည့် နဲ့ ။ ဓါတ်ပုံနဲ့ သတင်းနဲ့ တစ်ခြားစီက မကြာ ခဏ ပါဘဲ။ ရှိတဲ့ပုံ ကြုံတဲ့ပုံတင်တာ တကယ်တော့ စာဖတ်သူ ၊ သူတို့ ဂျာနယ်တွေကို ၀ယ်ဖတ်သူတွေကို အလေးမထားသလိုပါဘဲ။
အမှန်ကတော့ သတင်းထောက် သတင်းရေးသားသူ (မိမိဦးနှောက်ဖြင့်စဉ်းစား၍ရေးသားသူ)
အင်္ဂလိပ်စာ ကို သာမန်ရေးတတ်ဖတ်တတ်ရုံဖြင့်ဘာသာပြန်ခြင်း(ဥပမာ အာလူးချို)
နောင်ကောင်းဘို့အတွက် မျှော်ကြည့်ကြပါစို့ ကိုနိုဇိုရေ
အီးကယ်ဂျန်ရေ တစ်ချို့ အယ်ဒီတာက စာဖတ်သူလောက်တောင်မသိဘူးရယ်။
မအေးမြင့်ဆို မသိဘူး မာမာအေးဆိုသိတယ်
မောင်သိန်းလွင်ဆို မသိဘူး မောင်သာရဆိုသိတယ်၊
ဘိုညိုဆို မသိဘူး ညီပုလေးဆို သိတယ်
ဒင်းနစ်စ် ဆိုရင် မသိဘူး မွန်းအောင်ဆိုရင်သိတယ်
( အောက်ပုံ) ဆိုပြီးတော့ ပါတယ် ဒီရက်ထဲ သံတွဲမှာ ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဒီသတင်းလေးကိုလဲ
စိတ်ဝင်စားသွားတယ် အောက်ပုံ လို့ ညွှန်းထားတဲ့ ပုံလေးကို ကြည့်မိတော့မှ သူ့သတင်းက မှန်ရော
မှန်ရဲ့လားလို့ သံသယ ဖြစ်မိသွားတယ် ။ ကိုသန်းထွဋ်ဦး ရိုက်ပြထားလို့ သံတွဲက အေတီအာ လေယာဉ်ပုံ
မြင်ဘူးထားတယ် သတင်းစာထဲက အောက်ပုံဆိုတာမှာ ပန်ကာလဲ မပါဘူး ဒါဆို အေတီအာတော့
မဟုတ်တော့ဘူး သေချာကြည့်မိတော့မှ အမ်အေအိုင်လေကြောင်းလိုင်းက အဲယားဘတ်စ် ဆိုတာတွေနဲ့
တူတာမို့ A-320 ဆိုတာ သိရတယ် ။
ကိုnozomi ရေ ရှားရှားပါးပါး ရှာရှာဖွေဖွေတွေ့ တတ်လိုက်တာ။အရမ်းကိုတိကျစေ့စပ်ပါတယ်ဗျာ။
pooch ဆုတောင်းပေးသလို ဗဟိုကိုမှန်စေချင်ပါတယ် မမှန်သေးရင်တော့လဲ ထပ်ပစ်နေရမှာပေါ့ ၀ိုင်းပစ်ပေးနော
ဟုတ်တယ် ကိုထူးဆန်းရေ တချို့ စာနဲ့ ပုံလွဲတာကတော့ အလယ်တန်းကလေးတောင် သတိထားမိအောင်ပဲ ၊ သူ တို့ အဲဒီလို လုပ်နေတာ မှားမှန်းသိသိနဲ့ လုပ်တာလား မှားမှန်းရော သိရဲ့လား မသိပါဘူး
အန်ကယ်ကြီးရေ သတင်းအပိုင်းကို ခဏထား စာလုံးပေါင်း မှားတာကတော့ ဂျာနယ်တိုင်းပါပဲ ဟိုးခေတ်က သတင်းစာတစ်စောင်က သူတို့ သတင်းစာမှာ စာလုံးပေါင်း လုံးဝ မမှားဘူး အမှားထောက်ပြနိုင်ရင် တစ်လုံးကိုဘယ်လောက်ချီးမြှင့်မယ် ဆိုတာမျိုး စာဖတ်သူကို စိန်ခေါ်ရဲတယ် လို့ မှတ်သားဘူးတယ် ၊ အခုခေတ် ဂျာနယ်တွေလဲ အဲဒီလိုစိန်ခေါ်ရဲစေချင်ပါတယ် ၊ eleven ကို တစ်ခါပြောဘူးတယ် သူတို့ဂျာနယ်မှာ သတင်းလေးတစ်ပုဒ်ဖော်ပြထားတာ အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီးရဲ့ ပြောစကားကို ရေးထားတာ ကျွန်တော်တို့ အမေရိကန်နိုင်ငံကဘာညာပေါ့ ဗျာ ၊ အယ်ဒီတာခင်ဗျာ လို့ အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးက မန်းလေးသူလားလို့ မေးဘူးတယ် (အဲဒီအချိန်က ကွန်ဒိုလီဇာရိုက်လို့ ထင်တယ်) ဘာသာပြန်သူက ယောင်္ကျားလေး ဖြစ်ချင်ဖြစ်မယ် ၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ရဲ့ စကားကို တိုက်ရိုက်ရေးရင်တော့ ကျွန်မတို့အမေရိကန်နိုင်ငံ ဆိုတာမျိုး ဖြစ်သင့်တာပေါ့ ၊ ဒါမျိုးက အရေးမကြီးဘူးလို့ ပြောလို့ ရပေမဲ့ ထိပ်တန်း ဂျာနယ် တစ်စောင်ဖြစ်ချင်ရင်တော့ အသေးအဖွဲအမှားဆိုတာလဲ ပြုပြင်ဘို့လိုတာပဲ
ကိုပေါက် ပြောတာ အမှန်ဗျို့ အခြေအနေအရ စာဖတ်သူလောက်တောင် မသိပဲ အယ်ဒီတာ လုပ်ရရင်လဲ အမြန်ဆုံး ၀မ်းစာဖြည့်သင့်ပါတယ် ရှက်တတ်ရင် ရှက်စရာကြီး ဗျ
ကိုသန်းထွဋ်ဦး ကြိုးစားပြီး ဓါတ်ပုံရိုက် သတင်းတင်တာကို ကျေးဇူးတင်ကြောင်း ထပ်ပြောပါရစေခင်ဗျာ
ကိုနိုဇိုမီ ခင်ဗျား အခုလိုတိတိကျကျသေသေသပ်သပ်လေး ထောက်ပြပေးသွားတာကို ချီးကျူး လေးစား
ပါတယ်..ဒီလိုတွေသာလူတွေကကရုတစိုက် ထောက်ပြနေကြမယ်ဆိုရင် မီဒီယာတွေအားလုံး..တိုးတက်
ကျနော်နားလည်သလောက် ပြောချင်ပါသည်။ (ဝေဘန်ရေးဆိုတာ)အကြောင်းအရာတစ်ခုခုရဲ့ အားနည်းချက်(သို့)အားသာချက်များကို စိစိစစ်စစ် ထောက်ပြပြောဆိုခြင်း၊ ပြောရရင်တော့ ကောင်းစေလိုတဲ့ စေတနာ အရင်းခံသည်ဟုထင်ပါသည်။ ဒီဟာက အလကားပါကွာ၊ ဘာမှသုံးမရပါဘူး-စသည်ဖြင့်ပြောခြင်းသည် ဝေဘန်ရေး-မဟုတ်နိုင်ပါ၊ သူတစ်ပါးကို အပြစ်ပြောတတ်တဲ့ အဆိုးမြင်ဝါဒီ(အပြစ်ပြောခြင်း)ဟုထင်ပါသည်။
တရားတစ်ပုဒ်ထဲမှာ နာဘူးပါသည်။ တစ်ခါက အရှင်သာရိပုတတရာ အရှင်မြတ်သင်္ကန်းရုံရာမှာ မညီမညာဖြစ်နေတော့ ဘေးနားမှာရှိတဲ့ ကိုရင်လေးတစ်ပါးက ဒီကိုယ်တော်ကြီး သင်္ကန်းရုံတာညီလဲမညီဘူး လို့ပြောတဲ့အခါ အရှင်မြတ်က သင်္ကန်းကိုသေသေချာချာပြန်ပြင်ဝတ်ပြီး၊ ကိုရင်လေး တပည့်တော်သင်္ကန်းဝတ်တာ အဆင်ပြေပါပြီလားလို့မေးပြီး၊ နောင်အမှားတွေ့ရင် ထောက်ပြဝေဘန်ပေးဘို့ မိန့်တော်မူကြောင်း နာဘူးပါသည်။ သူတော်ကောင်းတို့သည် ဝေဘန်ခြင်းကို စိတ်မဆိုးကြပါ၊ ကျေနပ်စွာလက်ခံကြပါသည်။ ကျနော်တို့ဟာ ပုထုဇဉ်တွေပါ၊ ကိုယ့်ကိုလာဝေဘန်ရင် ဘာပဲပြောပြော အနည်းငယ်တော့ ကျွဲမီးတိုတတ် ကြတာများပါသည်။ ဒါပေမဲ့ အသိ-ကို သတိ-နဲ့ထိန်းပြီး ဝေဘန်မှုကို လက်ခံကြတာ လူတော်လူကောင်းတွေရဲ့ အလုပ်လို့မှတ်ယူထားကြပါသည်။
ဘာပဲပြောပြော (အထူးသဖြင့်ပေါ့)အများနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာတွေမှာ ထောက်ပြဝေဘန်ကြရမှာ အားလုံးရဲ့တာဝန်လို့ထင်ပါတယ်။
ပြောသာ ပြောရတယ်.. ဆူး ဆို မသိဘူး သူပြောတာ အမှန်ပဲလို့ ယုံလိုက်မှာ.. ကျွမ်းကျင်တဲ့ လိုင်းလည်း မဟုတ်တော့.. သံသယလည်း မရှိဘူး တွေးလည်း မတွေးမိဘူး မြင်တာကိုပဲ ယုံလိုက်မိတာပါပဲ။
ကိုယ့်လို လူမျိုးပေါင်းများစွာ ရှိနေတဲ့ အတွက် ဒီလို အဆင်ပြေနေကြတာပါ။
အမှန်တော့ မြန်မာပြည်မှာ အဘက်ဘက်က ထူးချွန်တဲ့ ပညာရှင်တွေ မြောက်များစွာ လိုအပ်နေပါတယ်။
မှားတယ် ထင်ရင်တောင် သတင်းစာ သတင်းတွေကို လေ့လာမှတ်သားတဲ့ အဆင့် လောက်နဲ့တော့ မဝေဖန်ရဲပါဘူး မင်းဘယ်လောက်တတ်လဲ ဆိုပြီးတော့ ပြောကြမှာပေါ့။
ဘာသာရပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အသီးသီးမှာ ထူးချွန်တဲ့ လူတွေ ဝေဖန်မှုတွေ ဖတ်ရတဲ့ အခါ.. တခုခုဆို မှန်ရဲ့လား ဟုတ်ရဲ့လား တွေးတောမှုတွေတော့ ဖြစ်လာတယ်.. ဒါလည်း သမရိုးကျ လက်ခံတတ်တဲ့ လူတွေ ဆူး လို လူမျိုးတွေ အတွက် အတွေးအခေါ်ပိုင်းမှာ အနာဂါတ် ယခုထက် ပိုတိုးတက်လာဖို့ တွန်းအားတွေ ဖြစ်စေလိမ့်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
သဂျီးကို ဆော်တယ်မှတ်လို့… ဟုတ်လည်းဟုတ်ဖူး..သွား မိနိုဇိုး အမျိုးမျိုး..သဂျီးရှေ့မှာ အပိုးကျိုး..သူများကိုတော့ ဆဲကာယိုး…ပိုးအမျိုးမျိုးထိုး..။
ကျွန်တော့ ပို့စ်ထဲ သတင်းစာ အပိုင်းလေး ထည့်ဘို့ ကြိုးစားနေတာ အခုထိ မရသေးဘူး ကွန်နက်ရှင် ကောင်းလို့ ရရင် ပိုပြည့်စုံသွားအောင် ထည့်လိုက်ပါမယ်
ကိုကြီးမိုက်ရေ အဲဒီလို ယုံကြည်ချက်ကြောင့်ပဲ ပြောဖြစ်နေတာပါ ၊ အားလုံးက ၀ိုင်းမြှင့်မှ ကိုယ်လိုချင်တဲ့ အဆင့်ရောက်အောင် မြင့်လာမှာပါ
ကိုမောင်မောင် ရှင်းပြပေးတာ ကျေးဇူးပါ ၊ အဝေဖန်ခံနိုင်မှ အပြုပြင် ခံနိုင်မှ တိုးတက်မှာပါ ၊ ကျွန်တော်တို့ လူမျိုးကအဲဒီအပိုင်းမှာတော့ အားနည်းကြတယ် ၊ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် အဲဒီလို ခံနိုင်ဘို့ ကြိုးစားနေပါတယ် လိုအပ်တာ ပြုပြင်ပေးကြပါခင်ဗျာ
ဒေါ်ဆူးရေ ကျွန်တော်လဲ ဒီလိုပါပဲ ကိုယ်သတိမထားမိလိုက်တာမျိုး လက်ခံလိုက် ယုံကြည်လိုက်တာပါပဲ
ဒီတပတ် ဗွိုင့်စ် ကဟာဆို ခေါင်းစဉ်က ပေါက်ကွဲသံကြီး တစ်ခု မုံရွာတစ်မြို့လုံး ဒုတိယအကြိမ်ထပ်ကြား ဆိုတဲ့ သတင်းတိုလေး မှာ — ယင်း ပေါက်ကွဲသံမှာ အမြင့်ပေနှစ်သောင်းမရောက်မီ တိုက်လေယာဉ်တို့၏ ဂီယာညက်သံဖြစ်သည် ဟု ဆိုတာရယ် ချင်းတွင်းမြစ် အနောက်ဘက်ကမ်း ကနီမြို့နယ်ရှိ ပုံတောင်ပုံညာ တောင်ကြော တွင် ကုန်းတွင်း ရေနံ ရှာဖွေရေးလုပ်ကွက်များကို တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ CNOPC ကုမ္ပဏီမှ ရရှိခဲ့ပြီးနောက် ယခုကဲ့သို့ တော်လည်းသံကဲ့သို့ ပေါက်ကွဲသံများ ကြားသိလာရခြင်းဖြစ်ကြောင်း — ဆိုပြီး ရေးထားတယ်
အဲဒီသတင်း ဖတ်ပြီးပြီးချင်း အဲဒီလေယာဉ် ညက်သွားတဲ့ ဂီယာကို ၀ပ်ရှော့ဆရာ ဘယ်လိုများ လိုက်ပြင်သလဲ လို့ စိတ်ဝင်စားသွားတယ် ကျွန်တော် ကြားဖူးတဲ့ အတွေ့အကြုံ အရ ဖြစ်နိုင်တာက အဲဒီတိုက်လေယာဉ် အသံထက်မြန်တဲ့ နှုန်းကို မြှင့်လိုက်တဲ့ အချိန် ဖြစ်သွားတဲ့ အသံဖြစ်မှာပါ ၊ တကယ် တော့ အဲဒီသတင်းနဲ့ တရုတ်ကုမ္ပဏီ အကြောင်းကို အတင်းကြီး ဆွဲကပ်လိုက်တာလဲ အဓိပ္ပါယ်တော့ မရှိပါဘူး
ကိုကြောင်ရေ ကျွန်တော်တို့ သူကြီးကတော့ ၀မ်းစာတကယ်ပြည့်တဲ့သူပါ ၊ ကိုကြောင်တို့ရဲ့ မျက်လုံးဒေါက်ထောက် ကြည့်မှုအောက်မှာ သူကြီးလဲ အမှားမပါအောင် သတိထားနေမယ် ထင်ပါတယ်
သတင်းရေးဖို့ က တယ်မလွယ်ဘူးလို့ ထင်တယ်ဗျာ
တော်ယုံဗဟုသုတရှိယုံနဲ့ လဲ ရဘူး..တော်တော်လေး အ၀ှာဖြစ်မှ သတင်းထောက်လုပ်-သတင်းရေးသားသမှုပြုကြရမှာဗျ
အတော်တတ်တဲ့သတင်ထောက်တွေရှိသလို အသင်သတင်းထောက် သတင်းသမားတွေလဲ ရှိသမို့ 
သတင်းတွေ ရွေးချယ် ဖြန့် ချိတဲ့ အယ်ဒီတာဟာလဲ ဗဟုသုတအတော်ကြွယ်ဝမှ အမှားအယွင်း နည်းမှာပေါ့နော့်
ဖတ်မိသလောက် တစ်ခုမဟုတ် တစ်ခု မှားကြတာတွေ့ ပါတယ်….အမှားနည်းဖို့ ကတော့ အယ်ဒီတာမင်း (အဲအထဲ သဂျီးမပါ
သဂျီးက တော်ပြီးသား ) တွေရဲ့ ပေါ်မှာ မူတည်တာပေါ့နော်..
ယိုးဒယားဘလော့ဂ်က တောက်တဲ့ပုံကြီး မပြီး ပြည်တွင်းထွက် တောက်တဲ့ ဆို သတင်းပို့ တာကို
အယ်ဒီတာမင်းက သေချာမသိတော့ မလေ့လာတော့ ဗရုသုက္ခတွေဖြစ်ကုန်ကော မဟုတ်လားဗျ
မနေ့ ကလဲ ဆိုင်လာပြီး အိမ်ပြန်ရမဲ့လမ်းက တစ်နေရာ
သတင်းလောကရဲ့ အားနည်းချက်များကို အချက်အလက်များနဲ့ ထောက်ပြခဲ့ခြင်း၇ဲ့ စေတနာ သဘောထား အတွက်လေးစားစွာ အားပေးပါတယ် ကိုနိုရေ။ (အဆဲခံကာ) ပြောရမယ်ဆိုရင်လည်း ဟိုမင်းသား .. သူ့မီဒီယာ အတွက် အယ်ဒီတာ ခေါ်တဲ့ ပညာအရည်အချင်းနဲ့ အတွေ့အကြုံ ကို သတင်းစာမှာ ကြော်ငြာ ထည့်တုန်းက ပြောခဲ့ရသလိုမျိုး ဖြစ်နေရအုံးမယ်။
ကိုယ့်အလုပ် အပေါ်မှာ တစ်ကယ် လေးစားတန်ဖိုးထားကာ စေတနာတရားနဲ့ လုပ်နိုင်ကြပါစေလို့ပဲ ပြောရပါတော့မယ်။
ကိုပေါက်ဖော်ရေ ကိုချောလဲ စိတ်တွေလေနေတယ် ထင်ပါ့
အင်းပေါ့လေ ရုတ်တရက်ကြီး ဆိုတော့လဲ ဖြစ်တတ်ပါတယ်
ကိုစိန်သော့ အားပေးတာ ကျေးဇူးပါခင်ဗျာ တောက်တဲ့ကိစ္စလို ရပ်ကျော် ရွာကျော် ဖြစ်သွားတော့လဲ ရှက်စရာကြီး ဗျ
မရှက်တတ်တဲ့ သူတွေကတော့ လုပ်နေကြတာပဲ ဗျို့
အင်္ဂုလိမာလ ပြောချင်လည်း ပြောတော့ဗျာ။
မနေ့က ညနေပိုင်း ပေါက်ဖေါ်ဆီ လမ်းကြုံဝင်လိုက်သေးတယ်။
နွယ်ပင်ပို့စ်လေးအကြောင်း ကျွန်တော် ခင်ဗျားကို ဖတ်ဖို့ သတင်းလှမ်းပေးလိုက်သေးတယ်လေ။
ပြီးလည်း ပြီးရော ကွန်းမန့်မှာ ကျွန်တော့်ကို ရိုက်ချသွားတယ်။
ကွမ်းတစ်ရာ ရေတမှုတ် နဲ့ တော့ မရဘူးဗျို့။
ဟိုင်နန် လိုက်ပို့မှ ကြေမယ်ဗျာ။
အရမ်းကို ကောင်းတဲ့ ပို့စ်လေးပါပဲ ကိုနိုဇိုမီရေ … ။
ကျွမ်းကျင်ရာ လိမ္မာရာဆိုသလိုပေါ့လေ … ကိုယ်နှံ့စပ်အောင် သိထား ၊ ဗဟုသုတရှာထားတာတွေနဲ့ ကိုက်ညီမှုမရှိတဲ့အခါ .. ဂျာနယ်တွေ ၊ သတင်းတိုက်တွေ ဖြီးမှန်း သိသွားပေမယ့် … အတော်များများကတော့ …. သာမန်ကာ လျှံကာ ကျော်ဖတ်သွားကြမှာပါပဲ … ။ သေချာဖတ်သည့်တိုင်အောင် ကိုယ်နဲ့ အရောတ၀င်မရှိတဲ့ …. သတင်းအကြောင်းရာဆို .. ဘယ်လေယာဉ်က ဘာခေါ်တယ်ဆိုတာ သိမှာ မဟုတ်ပါဘူး … ဟိုးတစ်လောက … 7ဒေးဂျာနယ်မှာ … အသည်းပုံကြီးပြောင်းပြန်ပါသေးတယ် … ။
ဂျာနယ်က လူတွေလည်း … သတင်းကိုသာရှာပြီး ပုံကို လက်လှမ်းမမှီတဲ့အခါ .. အဆင်ပြေသလို ထည့်သုံးလိုက်တယ် ထင်ပါရဲ့ … ။
တကယ်ဆို အခကြေးငွေယူပြီး ဖြန့်ဖြူးနေတဲ့ … သတင်း ဂျာနယ်တိုက်တွေ … အမှန်ဖြစ်သင့်တာပေ့ါနော် … ။
ကိုချောကြီး မဒမ်ချောစိတ်ညစ်အောင် မလုပ်ဘူး ဆိုတဲ့ ကတိသာပေး ကြိုက်တဲ့နေရာလိုက်ပို့မယ်
ဟုတ်ပ ဒေါ်အိတုံရေ ကျွန်တော်မှားရင် နိုဇိုမိ အသုံးမကျတာပါ ၊ သာမန်လူတစ်ယောက်မို့ ကျွန်တော်ပဲ ထိခိုက်မယ် အလွန်ဆုံး ကျွန်တော့် ပတ်ဝန်းကျင်လေးပဲ သက်ရောက်မှု ရှိမယ် ၊ မီဒီယာတွေကတော့ ပရိတ်သတ်ရှိလေ အောင်မြင်လာလေ အစစ အရာရာ အမှားကင်းအောင် စံပြဖြစ်အောင် နေသင့်ပါတယ်
သို့သော် ခုနောက်ပိုင်း အယ်ဒီတာတွေကတော့ …ဟာဟ
စာလည်းမဖတ် တခါကလေထန်ကုန်းမှာ မင်းနွယ်စိုး ဆောင်းဝင်လတ်
ဆရာဆောင်းကို စာမူတောင်းတယ်။ ဂျာနယ်ကျော်ဦး ချစ်မောင်မသိ မောင်ထင်မသိ
ဒင်းက စာမဖတ်ဘူးကဗျာတစ်ပုဒ်ပေးတော့ ဘာတွေရေးထားလဲမသိဘူးတဲ့
ဟာဟ…ဆရာရေ ဒီလိုပဲ သတင်းရေးရင်လည်း သတင်းအကြောင်း ၊တော့ တိကျခိုင်လုံရဲ့
လားတွေးရမယ် စာပေဆိုလည်း ဒီလိုပဲ အယ်ဒီတာ လုပ်ရင်တော့ ပြောဖို့ မလိုတော့ဘူး
စာဖတ်အားကော င်းနေရမယ်။ကျွန်တော်က ဂေဇက်က ဆရာတွေကို လေးစားတယ်
တကယ်တော်သူတွေပဲ အမှန်ပြောရရင် ..ကျွန်တော်လေးစားတယ်ဗျာ။
အခုလိုတွေးဆထောက်ပြတဲ့ ဆရာနိုဆိုမိကို လေးစားပါတယ်။
တကယ်ကို ကောင်းတဲ့ ပိုစ့်လေးပါပဲ ကိုနိုဇိုမီရေ
နွယ်ပင်သာဆို မသိဘဲ သူပြောတာ အမှန်ပဲလို့ထင်မိမှာပဲ ..
နွယ်ပင်တို့လို ဘာမသိညာမသိဘဲ ဖတ်နေတဲ့ လူတွေတော်တော်များများ ရှိမယ်ထင်ပါတယ်
ကိုနိုဇိုမီက အခုလို ထောက်ပြပြောပြလိုက်တော့မှ အမှန်ကိုသိသွားတော့တယ် ..
Ohh….ohh… you are right “Ko nozomi”
I also experience that like your said. Most of the our people (Myanmar People) fully reliable on Myanmar news papers than others because we’ve no choice before. Now, we can search in web if we think that information is not correct but still reading news paper as visual reference.
So that they (editors) should proud and more concentrate in their related field to get fully reliable by readers.
ဆရာထက် ၊ မနွယ်ပင် နဲ့ ahnyartamar တို့ ကွန်မန့်လေးတွေနဲ့ အားပေးတာ ကျေးဇူးပါခင်ဗျာ
ဆရာထက် တို့ မနွယ်ပင်တို့ လို့ စာပေလောက က လူတွေရဲ့အားပေးမှုရတော့ ပိုလို့ ၀မ်းသာမိပါရဲ့
တချို့ကလဲ လိုအပ်တာကို လိုချင်စိတ် အပြည့်နဲ့ ဖြည့်ဆည်းကြတယ် ၊တချို့ကလဲ ရှိတာလေးနဲ့ ကျေနပ်နေကြတယ်
မီဒီယာနဲ့ ကျွန်တော်တုိ့က လှေတစ်စီးထဲ အတူသွားကြတဲ့ ခရီးသွားတွေနဲ့ တူတယ်လို့ မြင်တာပဲ ၊ ဒီ မီဒီယာမကောင်းဘူး မဖတ်နဲ့ကွာ ဆိုတာထက် ပိုကောင်အောင် ပိုတော်အောင် ၀ိုင်းဝန်းကူညီပေးရင် သူတို့လဲ အကျိုးရှိ ကျွန်တော်တို့လဲ အကျိုးရှိမှာပါ
တခြားသူတွေကလဲ ကိုယ်သိတာလေးတွေ ရှိရင် အခုလို ပြောပြပေးကြပါဦးနော
ဟို ဒတ်လိုက်တတ်တဲ့နေ့ စဉ်ထုတ် စက္ကူလေ…
ဘယ့်နှယ့်ဗျာ အင်္ဂလန်အသင်း ဘယ်ခြမ်းကို ဟို အဖြူနဲ့ အမည်း လူနဲ့သရဲ…အဲ့လေ…
အဲ့၂ကောင် ကိုရေးထားတာ… အက်ရှလေ ကူလီ နဲ့ ဂျိုးကူလီ ဆိုဘဲ …ရယ်လိုက်ရတာ အူတွေတောင်နာတယ်…
အဆင့်မြင့် အယ်ဒီတာမင်းများ ပြည်တွင်း ဘောဂျာနယ်မဖတ်ဖူးထင့်…
(အင်ဂူလီမားလား က လက်ညှိုးပဲ ဖြတ်တာရယ်…)
ဂီဂီ တို့လို ရှေ့မီ နောက်မီ တွေ က အများကောင်းကျိုး ကိုယ့်ကောင်းကျိုးအတွက် ၀င်ပြောပြပေးပါနော
( အိမ်ငိုက်ရင်း ရှေ့ကိုမှီလိုက် ခါးညောင်းရင် နောက်မှီလိုက်ဖြစ်တာ မဟုတ်ဘူးနော်)
အတည်တစ်ခုပြောမယ် ဂီဂီ မှာ ထိုက်သင့်တဲ့ ဗဟုသုတလဲ ရှိတယ် တီထွင်နိုင်စွမ်းလဲ ရှိတယ်
အခု ခေတ် နိုင်ငံခြား စကားလုံးတိုင်းကို တိုက်ရိုက်ယူသုံးနေရင် မြန်မာစကားလုံးတွေ ရှားပါးသွားနိုင်တယ်
နောက်မျိုးဆက်သစ်တွေ အတွက် ဂီဂီ တို့လို ပါရမီရှင်တွေက တီထွင်ပေးစေချင်ပါတယ်
အရင်ဆုံး ကွန်မန့်ဆိုတာလေး ကို ထွင်ပေးပါနော်
သုမောင် ကတော့၊ ကွမ်းစကား ဆိုပြီး ပြောထားတာရှိတယ်။ အရည် မရ အဖတ် မရ ဆိုပေမယ့်၊ အရသာ တစ်ခုခု ပေးတဲ့စကား ဆိုပြီး သုံးဖူးကြောင်းပါ၊
awra-cho ရဲ့ ကွမ်းစကားကလဲ ကောင်းတာပဲ